Isitudiyo seKetchum epholileyo kwindawo egqibeleleyo
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguWes And Marci
Yonwabele idolophu entle yaseKetchum kunye ne-Sun Valley indawo ukusuka kwesi situdiyo esandula kulungiswa ngokutsha esisembindini weBald Mountain Ski Area kunye nomgama wokuhamba ukuya edolophini kunye neevenkile ezikumgangatho wehlabathi kunye neendawo zokutyela. I-condo yethu ifanelekile kwisibini okanye abahlobo abajonge ukwabelana ngendawo kwaye basebenzise ibhedi yesofa yokutsala.
Le ndawo intle yesitudiyo isandula ukulungiswa ukuze yenze ukukhanya, umoya opholileyo. Ime ngokugqibeleleyo phakathi kweRiver Run Lodge kwiBald Mountain kunye nesitalato esikhulu. Yonwabela ikomityi yekofu kwaye uthathe umbono ovela kwibalcony. I-Wi-Fi yasimahla kunye nentambo esisiseko inikezelwe. I-Smart TV enokukhetha ukusasaza ukuze ungene kwaye ubukele zonke iinkqubo zakho ozithandayo. Onsite ingqekembe yokuhlamba iimpahla ezikhoyo. Ukuzihlola ngokwakho nge-smart lock.
Ezona venkile zibalaseleyo kunye neendawo zokutyela iKetchum kufuneka ibonelele zonke zikumgama wokuhamba ngokulula.
Umbuki zindwendwe ngu- Wes And Marci
Sisoloko sikhona ukunceda ukuphendula nayiphi na imibuzo okanye uncedo ngayo nayiphi na imiba onokudibana nayo ngetekisi okanye ngefowuni. Sikwanaye nomphathi wepropathi/indoda ebambekayo yasekhaya kwaye inokuphendula ukuba iyafuneka.
UWes And Marci yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ketchum